သေတမ်းစာထားပြီး လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကာ အားလုံးကို လွှတ်ချနိုင်ခဲ့သူ SHINee's Jonghyun
သေတမ်းစာထားပြီး လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကာ အားလုံးကို လွှတ်ချနိုင်ခဲ့သူ SHINee’s Jonghyun
SHINee အဖွဲ့လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ တချိန်က အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ စင်မြင့်ထက်မှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ Jonghyun ကို တမ်းတမိကြမှာပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးတေးရေးတေးဆိုဖြစ်သလို ထူးခြားတဲ့အသံအရည်အသွေးကြောင့် တခေတ်တခါက အားလုံးရဲ့အသည်းစွဲ Jonghyun ဟာ ၂၀၁၇ December 18 ရက်နေ့မှာ သေတမ်းစာထားခဲ့ပြီး လောကကြီးကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးချိန်တုန်းက အသက် (၂၇) သာရှိသေးပြီး အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ တလက်လက်တောက်ပနေခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ လူမမြင်နိုင်တဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ ပြိုလဲထိခိုက်မှုတွေ ကြုံတွေ့ ခံစားခဲ့ရရှာသူပါ။ ကမ္ဘာတဝန်းမှာ Jonghyun ရဲ့ ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတာကြောင့် သူ့ရဲ့သေဆုံးမှုဟာ K-pop နယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကိုကော၊ နိုင်ငံအနှံ့မှာပါ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့ပါတယ်။
Jonghyun ဟာ သူ့ရဲ့ဂန်းနမ်းက အဆင့်မြင့်အိမ်ယာထဲမှာ အဆိပ်ငွေ့သုံးရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချိန်မှာတော့ သတိလစ်မေ့မြောနေတာကြောင့် ဆေးရုံကို အမြန်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ အသက်ကိုမကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မသေခင်က အစ်မဖြစ်သူကိုလည်း နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာပို့ပြီး ထာဝရနှုတ်ဆက်ခဲ့သေးရှာပါတယ်။
SHINee’s Jonghyun ရဲ့ သေတမ်းစာတချို့တဝက်ကတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ရင်တွေ တဆစ်ဆစ်ပါပဲ။ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့အပြုံးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိနေကြောင်းကို Jonghyun က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ‘ကျွန်တော်ရဲ့ နှလုံးသားအတွင်းဖက်ခြမ်းဟာ ကြေမွပျက်ဆီးနေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုစိုးမိုးနေခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော့်ကို ဝါးမျိုသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တွန်းလှန်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လို့ အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီ’ ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာလမ်းခရီးကို ရွေးချယ်မိခြင်းအတွက်လည်း ‘ကျွန်တော်ကလေ ဒီလောကကြီးမှာ ထင်ပေါ်သင့်တဲ့သူတစ်ဦး မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ကျော်ကြားအောင်မြင်လာတဲ့သူလည်း မဖြစ်ခဲ့သင့်ဘူးထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘဝကြီးက ဘယ်လောက်တောင် ခက်ခဲနေသလဲဆိုတာကို သိမြင်လာခဲ့ရတယ်။ ဘာလို့များ ဒီလိုဖြစ်အောင်အထိ ရွေးချယ်မိခဲ့ပါလိမ့်? ‌ထင်ရှားကျော်ကြားနေတဲ့ဘဝဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် မဖြစ်သင့်ခဲ့ပုံပါပဲ။ အရာအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အောင်မြင်လာဖို့က ခက်ခဲတယ်လို့ လူတွေက ပြောတတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်အဖြစ်ကတော့ ရယ်ရတယ်နော်။ ဒီအချိန်အထိ ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်ခဲ့တာ မှော်ဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်လိုပါပဲ’ လို့ နောက်ဆုံးရေးသားကာ လောကကြီးကို ထာဝရနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ၂၀၂၁ ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့မှာတော့ Jonghyun ဆုံးသွားခဲ့တာ (၄) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ အေးခဲနေတဲ့ဆောင်းတွင်းမှာ Jonghyun အတွက် ပူဆွေးလွမ်းဆွတ်မှုကတော့ တဖန်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
Idol တစ်ဦးမှာလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပြိုလဲတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ကြောင်းကို Jonghyun ကတော့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Jonghyun တစ်ယောက် အထီးကျန်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘဝကြီးမှာ အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်ကျော်‌နေမလား? ကျန်ရစ်ခဲ့သူပရိသတ်တွေကတော့ သီချင်းတွေနားထောင်တိုင်း လွမ်းဆွတ်နေရစမြဲပါပဲ။
Previous post China Year End 2021 နှစ်ကုန်ဆု​​ပေးပွဲမှာ ဆု​တွေကို ကိုယ်စီသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြတဲ့ K-Pop အနုပညာရှင်များ
Next post K-Pop Idol ​တွေ အပြင်မှာ အ​တွေ့ချင်ဆုံး အနုပညာရှင်အဖြစ် ​ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသမီး Han So Hee